Alahady faha-dimy Paka – 03/05/2015 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 9, 26-31)
Dia nankany Jerosalema i Saoly, ka nitady hikambana tamin’ny mpianatra, nefa natahotra azy izy rehetra satria tsy ninoany fa mpianatr’i Jesoa koa izy. Tamin’izay nalain’i Barnabe izy ka nentiny tao amin’ny Apostoly, dia notantarainy tamin’izy ireo ny nahitany ny Tompo teny an-dàlana, sy ny nitenenany taminy, ary ny hasahiana nasehony tamin’ny nitoriany ny anaran’i Jesoa tao Damasa.Izay vao niara-niditra sy nivoaka tamin-dry zareo tao Jerosalema izy, sady nitory tamin-kasahiana tamin’ny anaran’ny Tompo. Niresaka tamin’ny jentily koa izy, ary niady hevitra tamin’ny Helenista; kanjo notadiavin’ireo hovonoina. Ka nony fantatry ny rahalahy izany, dia nateriny tany Sezarea izy, vao nalefany ho any Tarsy. Niadana ny Eglizy eran’i Jodea sy Galilea ary Samaria manontolo fahizany, sady nandroso tsara sy nandeha tamin’ny fahatahorana ny Tompo izy, no nihamaro tamin’ny famporisihan’ny Fanahy Masina koa.
Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Joany Apôstôly (1 Jo 3, 18-24)
Anaka, aza tia am-bava sy amin’ny teny fotsiny, fa amin’ny asa sy amin’ny fo tokoa. Izany no hahafantarantsika fa avy amin’ny marina isika, sy hahazoantsika mampatoky ny fontsika eo anatrehan’Andriamanitra. Fa raha ny fontsika aza manameloka antsika, mainka fa Andriamanitra, izay lehibe noho ny fontsika, sady mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika, dia mahazo manatona an’Andriamanitra amin-toky isika. Ary na inona na inona angatahantsika dia ho azontsika, satria mitandrina ny didiny sy manao izay tsara eo imasony isika. Ary izao no didiny, dia ny hinoantsika an’i Jesoa-Kristy Zanany, sy ny hifankatiavantsika, araka ny didy nomeny antsika. Izay mitandrina ny didiny, dia mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy; ary ny ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny Fanahy izay nomeny antsika.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 15, 1-8)
Ny foto-boaloboka sy ny rantsany – Ny fifankatiavana – Halan’izao tontolo izao ny mpianatr’i Jesoa.
Izaho no tena foto-boaloboka, ary ny Raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia esoriny, ary izay rehetra mamoa dia rantsanany mba hampamoa azy bebe kokoa. 3Efa madio hianareo izao, noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mitomoera ao amiko, ary izaho hitoetra ao aminareo. Fa ny sampana izay tsy miray amin’ny foto-boaloboka tsy mahazo mamoa ho azy, ary toy izany koa hianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izaho no foto-boaloboka, ary hianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be, satria raha tsy izaho dia tsy mahefa na inona na inona hianareo. Izay tsy mitoetra ao amiko dia ariana any ivelany tahaka ny sampana ka maina; ary hangonina ny sampana ka hatsipy ao anaty afo, dia may. Raha mitoetra ao amiko hianareo ka mitoetra ao aminareo ny teniko, dia hangataka izay tianareo hianareo, ka hatao aminareo izany. Ho voninahitra ho an’ny Raiko raha mamoa be hianareo sy tonga mpianatro.